पर सर्नेहरुको कथा र बेथाहरु
वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, फागुन २४, २०७६ मा प्रकाशित
सत्य युगमा विदर्भ नगरमा श्येनजित नामक राजा सुखपूर्वक राज्य गर्दथे । ती ऋषितुल्य थिए । उनको राज्यमा एक जना सुमित्र नामक कृषक थिए । किसानका पत्नीको नाम जयश्री थियो, उनी अत्यन्त प्रतिव्रता थिइन । एक पटक वर्षा ऋतुमा खेतीको काममा व्यस्त रहेका बेला ती रजस्वला भइन । उनले आफू नछुने भएको त थाहा पाइन् तर त्यसलाई वास्ता नगरी काममा खटी रहिन् । आयू पूर्ण भएपछि ती दुवै मृत्युवरण गर्न पुगे अर्को जन्ममा रजोवती हुँदा नियम र मान्यतालाई पालना नगरेकाले जयश्रीले कुकुर्नी भएर र परसरेकी स्त्रीको सम्पर्कमा आउनाले सुमित्रले गोरु भएर जन्मनु पर्यो ।
वास्तबमा ऋतु दोषबाहेक ती दुबैले केही अपराध र पापकर्म गरेकै थिएनन् । उनीहरुलाई पूर्वजन्मको सबै कुराको सम्झना थियो । संयोगले ती दुबै आफ्नै छोरो सुचित्रका घरमा बस्न पुगे । सुचित्र धर्मात्मा थियो, शास्त्रीय मर्यादालाई पालना गर्नुका साथै समस्त जीवजन्तुप्रति दयाभाव राख्दथ्यो । एक पटक आफ्ना पिताको श्राद्धका दिन ब्राम्हाण भोजनका लागि निमन्त्रण गरेको थियो । घरमा बुढाबुढी मात्रै थिए श्रीमती खीर पकाएर काम विशेषले बाहिर निस्किइन । त्यही बेला सर्पले खीरमा विष खसालेर गयो । त्यो कुरा सुचित्रको आमा जयश्रीले देखिन जो कुकुर्नीको रुपमा ढोकामै बसेर हेरिरहेकी थिइन । रजोदोषले आफू कुकुर्नी हुन परेको अब ब्रम्हहत्याको पाप आफूले र छोराबुहारीलाई बोकाउन नहुने भन्दै दौडेर गएर भान्छामा पाकेको खीर छोइदिइन । खीर छुँदै गर्दा बुहारीले देखिन, देख्नै पथ्र्यो, नदेखेको भए त त्यो विष परेको खीर ब्राम्हणहरुले खान्थे । खीर छोइदिएको झोकमा बुहारीले चुल्होको अगुल्टो निकालेर कुकुर्नीको ढाडमा बजाइन । कुकुर्नी कुँइँकुईँ गर्दै निकै टाढा पुगिन । श्राद्ध सकिएपछि मात्रै फर्किइनन, तर उनले आज केही खान पाइनन ।
आफ्नै श्राद्धको दिन अर्कोका खेतमा जोतिनु परेको सुमित्र साँझ घर फर्कियो । उसले पनि आज दिनभर घाँस, पराल र पानीसमेत खान पाएको रहेनछ । दुबैको हाल उस्तै । साँझ गोरु (श्रीमान) गोठमा पुगेपछि कुकुर्नी (श्रीमती) ले दिनभरीको कहानी सुनाइ । त्यो कुरा घरमा रहेका सुचित्रले सुनिरहेका थिए । जो पशुवाक्य पनि बुझ्दथे । कहिल्यै पनि गोठमा नपस्ने सुचित्रले गोरु र कुकुर्र्नी (पूर्वजन्मका बाआमा)लाई टन्न खाने कुरा दियो । श्रीमानमा आएको परिवर्तन देखेर उनको श्रीमतीले पनि जिज्ञासा राखिन । सुचित्रले सबै कुरा बताए । उनीहरु रातभर निदाउनै सकेनन । बाआमालाई पशुयोनीबाट कसरी मुक्त गर्ने भनेर उपाय खोज्नका लागि विहानै सुचित्र जंगल पसे । ऋषिहरुको शरणमा पुगे, ऋषिहरुले रजोदोषको कारणले यस्तो भएको र भाद्रशुक्ल पञ्चमीको दिन अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले पितृले मुक्ति पाउने उपायसहित घर फर्किए । तिथि आएपछि त्यसै गरे र सुचित्रका बाआमाले मुक्ति पाए ।
यो कथा सत्य युगको हो, अहिले कलियुग चलिरहेको छ । तीन वटा युग फेरिएको छ, तर मनमा रजस्वला हुँदा छोइछिटो गर्दा अनिष्ट हुन्छ भन्ने डर मनमा गहिरो गरी गडिएको छ । अदृश्य डर मानिसको मनमा यसरी गड्छ नि हटाउनै सकिदैन । अहिले पनि कोहीसँग नडराउने बालबालिकालाई रातको समयमा ‘भूत’ आउँछ भनेर अभिभावकहरु डर देखाउँछन । दिउँसोको समय ‘बुजी’को डर देखाइन्छ । बालमतिष्कमा यसरी गड्छ कि जति गर्दा पनि हटाउन सकिन्न । बालबालिकाहरु निकै जिज्ञासु हुन्छन, अनेकौ प्रश्नहरु सोध्छन, महिनावारी के हो ? मामु किन पर बसेको ? खाना किन नबनाएको ? मन्दिर किन नगएको आदित्यादी । धेरैजसो अभिभावकले मन्दिरको कुरा आएपछि पाप र धर्मको कुरा गरेर टार्छन । यौन, तथा प्रजननका बारेमा आउने प्रश्नहरुको एकमुष्ट र साझा जवाफ हो– ‘ठूलो भएपछि आफैं थाहा पाउँछस/पाउँछेस ।’ यसैले हो कुरो बिग्रिएको । अहिले पनि ऋषिपञ्चीमको पूजा गरिन्छ । त्यही सत्ययुगको कथा सुनाइन्छ । त्यसलाई समसामयिकतामा ढालिदैन । अहिले पनि विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन शिक्षा राम्रोसँग पढाइँदैन, पुरोहितले पुरानै शैलीमा ऋषिपञ्चमीको पूजा लगाउँछन, पुरानै पारामा कथा सुनाउँछन ।
अहिले सडकदेखि संसदसम्म ‘छाउ’को कुरा भइरहेको छ । सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा छाउ बस्ने घरहरु भत्काउन थालिएको छ । छाउ गोठ बस्नेलाई राज्यले दिने कुनै पनि सुविधा नदिने उद्घोष गरिएको छ । तर छाउगोठ भत्काए पनि उनीहरु बस्न छाडेका छैनन, उनीहरुलार्ई देउताको डर छ । यसरी हेर्दा राजदण्ड भन्दा त ‘देव’दण्डको डर धेरै देखियो । राज्यले जे जति गरे पनि सुदूरको मात्रै हैन, काठमाडौंकै महिलाहरु महिनावारी नबार्न तयार भइसकेका छैनन् ।
हिन्दूत्व अर्थात जीवन वाँच्ने एक निर्देशिका, जसले विभिन्न संस्कारहरुले भरिएको पद्धतिले जीवनको मार्ग देखाएको छ । जसले त्यो समयदेखि अहिलेसम्मका मानवीय व्यवहारको सहजताको उपज संस्कारहरु बनाएको प्रष्ट छ । तर आजसम्म आइपुग्दा परिमार्जनको अति जरुरी हुन्छ । तर समाजका बुझक्कड भनाउँदाहरु नै त्यस्ता संस्कारलाई यो आधुनिक विश्वमा समेत जस्ताको तस्तै अनुशरण गरिरहेका छन । यो आजको मानवीय समाजका लागि चरम शोषण र पीडा दिने माध्यम बनिरहेका छन् । त्यसको उदाहरण हो महिलाको रजश्वला बार्ने प्रथा ।
महिलाको मासिक धर्म, पन्छिने, रजश्वला, छाउपडी र राजोधर्मका रूपमा हिन्दू संस्कृतिमा प्रचलित छ । निश्चय नै शास्त्रहरूमा रजोधर्मका अवस्थामा महिलाहरू अपवित्र हुन्छन् भनिएको छ, तर पाप हो भनिएको कहि कतै पाइँदैन । स्मृति र धर्मसिन्धुमा महिलाहरूले रजोधर्म भएका दिनहरूमा दैनिक क्रियाकलापहरू जस्तै पूजापाठ, घरव्यवहार, शारीरिक श्रम, अध्यात्मिक संलग्ता र शारीरिक सुखभोगबाट जोगिन सल्लाह दिइएको छ । तत्कालिन समयमा कानून विधि या वैज्ञानिक आधार थाहा नभए पनि महिलालाई त्यो बेला कष्ट हुन्छ भनेर आरामका लागि त्यो नकारात्मक व्यवस्था राखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यो बेलाको समाजमा मूख्य काम भनेको गोठ र भान्छाको मात्रै हुन्थ्यो, यी दुबै काम महिलाको जिम्मामा थियो । यी दुई कामबाट चार दिनका लागि छुट्कारा पाउनु भनेको पूर्ण आराम पाउनु हो । महिनावारीको समयमा हुने पीडा कम गर्ने आरामले नै हो । तर त्यही कुरा अप्रभंश हुँदै लोकको व्यहारमा आउँदा महिलाको रजस्वला पूर्वजन्मको कुकर्मको पापको रुपमा अथ्र्याइयो । त्यसले समस्या पारिरहेको छ ।
महिलाको पाठेघर तथा अण्डासयमा दुई किसिमको हर्मोन आस्ट्रोजन र प्रोजेस्ट्रक्सीको उत्पादन हुन्छ । ती दुई हर्मोनले संकुचन (कन्ट्राक्सन) तथा यसका भित्री तह (इडोमेट्रियम) बनाउन र बिगार्न तथा महिनावारी गराउन भूमिका खेलेको हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञानमा पाठेघरको भित्री तहमा हार्मोनहरूको नियन्त्रणमा टुक्रिएका टुक्राहरू योनीमार्ग हुँदै रगत बग्ने प्रक्रिया नै मासिक स्त्री धर्म हो भनिएको छ । अझ सजिलो बुझ्ने हो भने, गर्भाधान नभएका डिम्बहरु महिलाको योनीवाट निष्काषित हुने सरल र सामान्य प्रक्रियानै रजस्वाला हो ।
पहिलो पटक हुने महिनावारीलाई (मेनार्की) भनिन्छ भने रोकिएको अवस्थालाई (मेनोपज) भनिन्छ । महिनावारी हुँदा ९० प्रतिशत महिला पीडामा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो एक सामान्य प्रक्रिया भए पनि यसमा विभिन्न किसिमका समस्या हुने गर्छ । हुन त रजश्वला हुनु महिलाहरूको प्राकृतिक तथ्य हो तर आधुनिक विज्ञानले रजस्वला भएका बेलामा महिलाहरूले पूर्णरूपमा दैनिक श्रमबाट विश्राम लिन सल्लाह दिन्छ । रजोधर्मका बेला विभिन्न संक्रमणहरूको खतरा बढी हुन्छ । मनोविज्ञानले यस बेला महिलाहरूमा बढी मानसिक तनाव हुने भन्ने सिद्ध गरिसकेको छ । शास्त्रहरूले जेजस्तो भाषाशैली प्रयोग गरे पनि महिनाका चार÷पाँच दिन महिलाले अनिवार्य रूपमा विश्राम गर्नुपर्ने नियम बनाएको बुझ्नु पर्छ । तर यसलाई व्यव्स्थित र अनिवार्यता दिन त्यो बेलाको उत्तम विकल्प भएकै कारण ‘नछुने’ बनाइएको हुन पर्दछ । वा ‘पर’ सारिएको हुन सक्छ । जुन अहिलेको समयका लागि गलत छ ।
महिलाहरु त छोटो समय पर सर्छन । अर्थात सामान्यतया ११ देखि ५० वर्षको उमेरसम्म मात्रै । तर पुरुष त जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त छाउ बारिरहेको छ । बाल्यकालमा आमाको, किशोर अवस्थाामा दिदीबहिनीको, युवाबस्थामा श्रीमतीको, बृद्धाबस्थामा छोरी/बुहारीको छाउ बार्न विवश छ । विशेषगरी ब्राम्हण र क्षेत्री समुदाय यो मामलामा अलि कट्टर देखिएका छन । हिन्दूधर्म नै माने पनि नेवार समुदाय यो मामलामा निकै उदार छ । महिनावारी भएको समयमा ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका श्रीमान श्रीमती अलग्गै बसिरहेका बेला, नेवार समुदायका कतिपय दम्पती ढुक्कले यौन सम्पर्क गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन । आफू कुनै पनि अन्धविश्वासमा नरहेको भन्ने किशोरीहरु पनि महिनावारीका समयमा हरेक काम गरे पनि मन्दिर भने नगएको अनुभव सुनाउँछन । कारण सोध्यो भने भन्छन–‘कस्तो, कस्तो’ लाग्छ । यही कस्तो कस्तो लाग्नु नै समस्या हो । अदृश्य ‘शक्ति’ को त्रास होला ।
कामकाजी महिलाहरू, पढ्ने विद्यार्थीहरू ‘पन्छिएकै’ कारण परीक्षा दिनबाट वा अन्य अत्यावश्यक कामबाट वन्चित गराइनु घरपरिवारले हेलाहोचो, छिछि दुरदुर गर्नु अनुचित हो । तर पश्चिमा छाडा यौनवादका आडमा परम्परालाई सत्तोसराप गर्नु पनि उचित छैन । आज भोलिका प्रबुद्ध महिलाहरूले सांस्कृतिक परिपेक्षको रक्षा गर्दै रीतिरिवाजलाई सुधारेर अघि बढ्नु पर्दछ ।
मानव श्रृष्टि नारीहरु विना संभव छैन र रजस्वालालाई जत्तिकै लुकाएर अनि छुवाछुतउन्मुख रुपमा हेरे पनि श्रृष्टिको प्रथम र पुण्य गुण नै नारीहरुको रजस्वला हो । रजस्वला नारीहरुको गर्भाधान गर्न सक्ने क्षमताको प्रमाण अनि नितान्त प्राकृतिक प्रक्रिया हो । शास्त्रहरुले पनि रजस्वला र यस प्राकृतिक गुणप्रति समस्त मानव जगतको ध्यानाकर्षित गर्न ऋषिपञ्चमीको परिकल्पना गरेको हुन पर्दछ तर यसलाई कुनै दोष या पापभन्दा पनि गुण र श्रृष्टिको कारकका रुपमा अभिव्यक्त गर्दै आजका दिनमा रजस्वलालाई नितान्त सामान्य अनि छुवाछुत भन्दा पनि सरसफाइ हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । रजस्वला श्रृष्टिको सुरुवात हो, यसर्थ छाउ वा अन्य कुनै पनि कुसंस्कारको रुपमा लिएर यसको विनास गर्नु हुँदैन । श्रृष्टि वा सिर्जना गर्न सक्ने महिला छाउ गोठमा आफैं मारिइन भने त्यो जस्तो विडम्बना केही हुनै सक्दैन ।